Forum serasera malagasy Eritreritr ndalo : maninona raha esorina i Hery e - Dinika forum.serasera.org
Eritreritr ndalo : maninona raha esorina i Hery e
Fitohizan'ny hafatra : Eritreritr ndalo : maninona raha esorina i Hery e
rabaradaka - 28/08/2015 10:47
Ohatry ny hoe vazivazy nefa dia eritreritra mandalo ity ry reto a : maninona raha andao esorina i Hery Rajaonarimampi(esona)anina e
Jugali - 28/08/2015 22:15
Tsy reraka aho mamerina an'ity @ olona maro. Mbola ts azon'ny Malagasy iany v tsy ao anatin'ny fifankahalana, fifanaratsiana, fifampialonana sns sns sns no ahitana ny soa ho an'ny tanindrazana! Eo @ krizy rehetra nisy hatramzay + Ny fomba fitondrana nisy rehetra hatramzay dia izay no lesona tsotra ts mety azon'ny Malagasy mints na ny mpitondra na ny mpanongana na ny vahoaka sns. Rehefa mbola ts mahazo an'io isika dia eto ifampiantsy sy tsy ifanampy sy tsy hiavana eto foana foana.
Aza lany andro mitsikera, manohitra sy manaratsy foana sy mampiatra ny fanatisme. Malagasy avokoa isika ka tokony handray fanampahankevitra matotra @ fotoana iray, fa tsy ny vahiny mpampisara-bazana hatrany no hahavita hilalao atsika.
Tsotra ny fanontaniana : mandram-pahoviana no mbola ts hihavana sy ifanapepo toy izao foana isika? rehefa tonga saina ny rehetra v hoy ianao? Tsy ho tonga amzany mints ra hifampiandry eo foana fa tsotra : aza miandry ny havanao Malagasy, aza miandry ny mpanao Politika sasany (na izy rehetra), aza miandry an'reo mbola ts te hiray fa rehefa tsy izay di mitovy aminy ian ianao. Atomboy aminao ny toe-tsaina sy ny toe-mpifandraisana sy fifampitondrana tiana hisy eto an-tanindrazana dia efa niampy iray izay ny olona resy lahatra.
Tsy misy soa azo na kely aza @ fimenomenonana, fitsikerana sy fanonganana filoha. Raha hiteny ian dia ny soson-kevitra sy teny mitory fihavanana no ts asiana fetra. Jereo ny krizy sy ny fitondrana mpamoritra nisy hatramzay fa ts mbola nahitana soa na kely aza. Tsy any no lalana.
Strong3 - 03/09/2015 11:32
amin'ny akapobeny dia tsy momba ilay hoe andao esorina i hery aho
fa toa mitandro filaminana be ihany izy
saingy raha ny tombotsoako manokana no jerena dia te hiteny ny tena hoe : andao eh! :p
chiara - 05/04/2016 18:50
Taitra za everiko fa i Hery Serasera